प्रदेश नं २मा बाढी: ३ बेपत्ता, ८ सय ४५ विस्थापित, दर्जनौँ गाउँ डुबानमा - NepalKhoj
प्रदेश नं २मा बाढी: ३ बेपत्ता, ८ सय ४५ विस्थापित, दर्जनौँ गाउँ डुबानमा
नेपालखोज २०७७ साउन ७ गते १४:५८
वीरगञ्ज । केही दिनयता परेको अविरल वर्षाका कारण प्रदेश नं २ मा तीन जना बेपत्ता भएका छन् भने दुई जनाको उद्धार गरिएको छ । भारी वर्षाबाट प्रदेश नं २ मा ८४५ जना विस्थापित भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।
बाढीबाट रौतहट जिल्लाको चाँदी नदीमा बगेर चन्द्रपुर नगरपालिका–३ बस्ने ५० वर्षीया सुकमानी थिङ बेपत्ता भएकी छन् । मङ्गलबार बिहान सो खोलामा पौडी खेल्न भएका थिङलाई खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएकी हुन् ।
यसैगरी महोत्तरीको रातु नदी पार गर्न खोज्दा भङ्गाहा नगरपालिका – ६ सङ्ग्रामपुरका ३५ वर्षीय वीरेन्द्र कापरलाई बगाएको छ । यसैगरी नाम खुल्न नसकेका सर्लाहीका एक जना पौडी खेल्न गएकामा उनी पनि बेपत्ता छन् ।
यस्तै सर्लाहीमा वाग्मती नदीले बगाउँदा दुई जनाको उद्धार गरिएको छ । वाग्मती नगरपालिका–१२ स्थित उक्त नदीको बाढीमा फसेका दुई जनाको उद्धार गरिएको छ । नदीमा दाउरा टिप्न गएका स्थानीयवासी २४ वर्षीय डेटमान गोले र १६ वर्षीय नीरज तितङ खोलाको मध्य भागमा फसेकामा प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको थियो ।
अविरल वर्षा र बाढीका कारण प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लाका ६९ परिवारका मानिस विस्थापित भएको प्रदेश कार्यालयका प्रवक्ता मकेन्द्र मिश्रले राससलाई बताउनुभयो । अविरल वर्षा र बाढीको कहरबाट मध्य तराईका अधिकांश जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । बङ्गरी, दूधौरा खोलामा आएको बाढीले प्रसौनी गाउँपालिका–५ र ६ को करीब ३५० बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली कटान गर्दा करोडाैंको क्षति भएको छ । पसहा खोलामा आएको बाढीले कलैया उपमहानगरपालिका–२१ को भोडहा र सोनरनिया, खम्बा क्षेत्रमा लगाइएको सय बिघाभन्दा बढी धानबाली नष्ट गरेको छ ।
यसैगरी अविरल वर्षाका कारण वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको अधिकांश भाग डुबानमा परेपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ । बाढी र वर्षाले पश्चिमी पर्साका अधिकांश गाउँपालिकाको एकअर्को गाउँपालिकासँग सम्पर्क बिच्छेद भएको छ । हिलाम्य सडकका कारण मानिस तथा सवारी साधनको आवतजावत प्रभावित भएको छ ।
पर्साको सिङ्गाही नदीमा आएको बाढीले पर्सागढी नगरपालिकाको अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेको छ । तीन दिनदेखि परेको वर्षाका कारण पश्चिमी पर्साका दर्जनौँ गाउँ डुबानमा परेको छ । रासस
‘सरसफाइ मजदुरलाई तालिमको व्यवस्था गर्नूस्’
कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार
शनिबार आर्थिक सर्वेक्षण, आइतबार बजेट
‘पूर्वाधार र विद्यार्थी नभएका विद्यालयलाई मर्ज गर्छौं’ (बालेन शाहसँग अन्तर्वार्ता)
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकाे वार्षिकोत्सवमा गृहमन्त्री खाण (फाेटाे फिचर)
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित
मेलम्ची खानेपानीको सफल परीक्षण, सात हजार धारामा झर्‍याे पानी
सबैभन्दा कमाउने खेलाडी मेसी !
चुनाव जितेपछि बालेनले भने- काठमाडौंलाई विश्वकै सुन्दर र उत्कृष्ट सहर बनाउने हो
१२ जनामा कोरोना, १३ जना डिस्चार्ज
१५ अंकले नेप्से घट्दा एक अर्ब २९ करोडको कारोबार
भिटोफका सद्‌भावना दूत बने भरतबन्धु
उपमेयर डंगोलले भनिन्- सबैले सोचेकै जस्तो कान्तिपुरी नगरी बनाउने हो
बालेनले भने- काठमाडौंलाई विश्वकै सुन्दर र उत्कृष्ट सहर बनाउँछु
आगलागीबाट ६ घर क्षति
शुक्र मेष राशिमा हुँदा पर्ने प्रभाव !
कुरानमा के छ ?